सिएमसी आक्रमणका ११ आरोपी एक–एक लाख धरौटीमा रिहा, एनएमएको असहमति, किन राजी भो अस्पताल ? – Health Post Nepal
सिएमसी आक्रमणका ११ आरोपी एक–एक लाख धरौटीमा रिहा, एनएमएको असहमति, किन राजी भो अस्पताल ?
२०७६ कार्तिक १० गते १८:३८
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेज तोडफोड गर्ने ११ जनाले ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । ३ कात्तिकमा कलेज तोडफोड गर्ने ११ जना पक्राउ परेका थिए । अस्पतालले आक्रमणमा १४ लाख क्षति भएको भन्दै बिगोदाबी प्रस्तुत गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धानले ११ लाख क्षति भएको यकिन गरेको थियो ।
पक्राउ परेका सबै एक–एक लाख रुपैयाँ बुझाएर धरौटीमा रिहा भएका छन् । कलेजले १४ लाखबराबरको क्षति भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बिगो असुलउपर गरीपाऊँ भन्दै किटानी–जाहेरी दिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध चितवन प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो ।
अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरू ५५ हजार धरौटी तिरेर तारेखमा रिहा भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अभियोग पुष्टि भए १० हजार जरिवाना र एक वर्ष जेल बस्नुपर्ने बताए ।
नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिका–९ वसन्तपुरकी ३२ वर्षीया आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा २ कात्तिकमा सिएमसी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । नाकमा समस्या भएर उपचार गराउन अस्पताल भर्ना भएकी ज्ञवालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले कलेजको मूल गेट, आइसियू, सिसियूलगायत क्षेत्रमा तोडफोड गरेका थिए । करिब २ सयको संख्यामा आएको आक्रोशित समूहको आक्रमणबाट एक स्वास्थ्यकर्मी र एक सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।
के छ चिकित्सक संघको प्रतिक्रिया ?
घटनालगत्तै दोषीलाई कारबाही गराउन सक्रिय भूमिकामा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले सिएमसी आक्रमणकारीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । स्वास्थ्यसंस्थाजस्तो सार्वजनिक तथा अति संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आक्रमणसम्बन्धी मुद्दा सिडिओमा नभई सोझै अदालतमा जानुपर्ने एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ ।
‘आक्रमणकारीलाई धरौटीमा रिहा गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, मैले यसबारे विस्तृत बुझ्न भ्याएको छैन र कानुनी प्रोसेसबारे विश्लेषण गरेको छैन,’ डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘तर, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि भएका यस्ता घटनामा सिडिओमा नभई सोझै अदालतमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमणका दोषीलाई बिनाधरौटी जेलचलान गर्नुपर्छ भनेरै ‘जेल विदाउट बेल’का लागि हामी निरन्तर लड्दै आएका छौँ ।’
सिएमसीको केसमा सिडिओबाट धरौटीमा रिहाभन्दा पनि अदालतमा गएर थुनछेक बहस हुनुपर्ने बुझाइ महासचिव कार्कीको छ । सिडिओबाट धरौटीमा रिहा गरिनुका पछाडि राजनीतिक दबाब हुन सक्ने शंका डा. कार्कीको छ । ‘अदालत नलगी धरौटीमा रिहा गरिनुले स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणको गिरोह राजनीतिक संरक्षणमा रहेको शंका उब्जाएको छ,’ महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘यसमा एनएमएको सहमति हुँदैन, केस अदालत जानुपर्छ ।’
घटनालाई स्थानीयस्तरमा नियालिरहेका एनएमएका केन्द्रीय सदस्य डा. अनिल कार्कीले भने धरौटीमा रिहाको निर्णयप्रति आफ्नो मिश्रित प्रतिक्रिया जाहेर गरे । यद्यपि, केस सिडिओमा नभई अदालतमै जानुपर्नेमा उनको पनि जोड छ ।
‘हामीले चाहेको मुद्दा अदालतमै जाओस् भन्ने नै हो, तर पीडितको बिगोदाबीअनुसार पहिलोपटक आक्रमणकारीलाई क्षतिपूर्ति भराइनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ डा. अनिलले भने, ‘अहिलेसम्म यस्ता केसमा आक्रमणकारीलाई क्षतिपूर्ति तिराएको सुनिएको थिएन, यस हिसाबले यो ऐतिहासिक सुरुवात भने हो ।’ भौतिक क्षतिपूर्ति महत्त्वपूर्ण नभए पनि यसले एउटा नजिर भने बसाल्ने उनको विश्वास छ ।
किन सहमत भयो सिएमसी ?
सिएमसीले पनि सुरुमा मुद्दा अदालतमै जाओस् भन्ने चाहेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । तर, अदालती प्रक्रिया वर्षौंसम्म चल्ने हुँदा अस्पतालले तत्कालीन राहतलाई रोजेको छ ।
अस्पतालले १४ लाख क्षति भएको बिगोदाबी पेस गरे पनि प्रहरीको छानबिनमा ११ लाख क्षति भएको निर्धारण गरिएको थियो । पक्राउ परेका आरोपी उक्त रकम तिर्न तयार भएपछि अस्पतालले मुद्दाको झमेलामा पर्नुभन्दा तत्कालै क्षतिपूर्ति लिनु उचित ठानेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
One thought on “सिएमसी आक्रमणका ११ आरोपी एक–एक लाख धरौटीमा रिहा, एनएमएको असहमति, किन राजी भो अस्पताल ?”
आफ्ना कार्यकर्ता तथा आफ्नो चुनाब क्षेत्रका केही गुण्डाहरुलाई बचाउने प्रपञ्च चलाउने शशांक ज्यु भएकाले कुरा यो भन्दा अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराईन्छ ।